တရုတ်စူပါပါးလွှာသောအနိမ့်နောက်ကျော lumbar ထောက်ခံမှုခါးပတ်စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်း | ကွမ်းခြံကုန်း
စူပါပါးလွှာသောအနိမ့်ကျော lumbar ထောက်ခံမှုခါးပတ်
ပစ္စည်းအခြား, အရည်အသွေးမြင့်မားသောအ ၀ တ်အထည်နှင့်ညှိနိုင်သောခါးပတ်များ၊
လိင်:Universal, ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်သူ, Universal, Back Pain Relief
အရောင်:ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်
လိုဂို:သင်၏ Logo ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်
ထုတ်ကုန်အမည်:Super Thin အောက်ပိုင်းကျောထောက်ခါးပတ်
ထုပ်ပိုးခြင်း -1 pc / opp အိတ်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား:တစ်လလျှင် 70000 Piece / အပိုင်းပိုင်း
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 70000 Piece / အပိုင်းပိုင်း
အလွန်ပါးလွှာသောကျောဘက်ရှိကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုယ်ဟန်အနေအထား Lumbar ပံ့ပိုးမှု ergonomics 8-shaped drawstring အရခါးပတ်ဒီဇိုင်းသည်ပခုံးကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုမြန်ဆန်စေရန်နှင့်ပခုံးအနေအထားကိုအကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်ထိန်းသိမ်းရန်နောက်ထပ်ဖိအားများကိုပေးသည်။ Back အထောက်အပံ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်ခြင်းသင့်လျော်စွာရွေ့လျားမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်ထုပ်စပ်ခြင်း။ Lumbar နောက်ကျော Braceဝါဂွမ်းသိုလှောင် pads underarm တိုးမြှင့်နှစ်သိမ့်ပေးသည်။ နှစ်ပုံးသင့်လျော်သော positioning ကိုဆက်ကပ်။
နာမည်: ပါးလွှာသောအနိမ့်နောက်ကျော lumbar ထောက်ခံမှုခါးပတ် အမှတ်တံဆိပ်: Aofeite မော်ဒယ်: AFT-B006 အရွယ်အစား: စံအရွယ်အစား အရောင်: အနက်ရောင် အဓိကပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်သောအထည်နှင့်ညှိနိုင်သောခါးပတ်များ အထုပ်: စက္ကူ / ဘူးသီးအိတ်ကိုပုံးထဲထည့်ပါ သင်္ဘောပို့ဆောင်ခြင်း DHL၊ FedEx, TNT ။ SF ။ UPS နှင့်ပင်လယ်သို့မဟုတ်လေကြောင်းဖြင့်သင်္ဘော။ ငွေပေးချေမှု: L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, လုံခြုံသောငွေပေးချေမှု, ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CE / FDA / ISO9001 / ISO13485
·အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အပြည့်အ ၀ ညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောကျားမလိင်ဒီဇိုင်း
·သင့်ကို ပိုမို၍ ကြည့်ကောင်းလာစေရန်နှင့်နုပျိုစေရန်သင် ပိုမို၍ ရှည်လျားသောရပ်တည်မှုကိုကူညီပါ
· unflattering ကျက်ပခုံးတား နှင့်အထွေထွေ slouching
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည် ဒူးထောက် ပံ့ပိုးမှု, ခါးနောက်ကျောသတ္တုတွင်းပံ့ပိုးမှု, ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector, Wrist Brace Support, တံတောင်ဆစ်သတ္တုတွင်း ပံ့ပိုးမှုစင်တာ ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ် Support, Shoulder Brace ပံ့ပိုးမှု, လည်ပင်းသတ္တုတွင်းအထောက်အပံ့နောက် ... ပြီးတော့။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feature ဝန်ဆောင်မှု၏တ ဦး တည်းအမိန့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းတံဆိပ်နှင့်အရောင်သေတ္တာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်!
စံပြအောက်ပိုင်းကိုရှာဖွေနေသည် နောက်ကျောထောက်ခံမှုခါးပတ်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း? သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အောက်ပိုင်း Lumbar အထောက်အကူပြုခါးပတ်အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏မူလကျောရိုးကျောထောက်နောက်ခံပံ့ပိုးမှုစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ Self- အပူ Pad နှင့်အတူခါး Brace
နောက်တစ်ခု: အားကစားအတွက် Spring Strip Knee Sleeve
Adjustable ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector သားရေ Brace Oem ...
ချိန်ညှိနိုင်သည့်ပံ့ပိုးမှု Brace Shoulder Backure ...
elastic ကျောကိုယ်ဟန်အနေအထား corrector ပြန်ကိုယ်ဟန်အနေအထား ...